Vol. 13 SEPTEMBER, 1911. No. 6
Xuquuqda, 1911, by HW PERCIVAL.
Sayniska casriga ah wuxuu ugu dambayntii qirtay Duulista qoyskiisa ee sayniska la ixtiraamo, oo hoos yimaada magaca pneumatics, aerostatics, aeronautics ama aviation. Farsamoyaqaannada duulista ayaa baran kara oo ku dhaqmi kara nin kasta oo aqoon u leh iyada oo aan laga lumin aqoontiisa.
Qarniyo badan waxaa jiray rag karti iyo istaahila, oo ay weheliso kuwa u ololeeya iyo kuwa xiisaha u qaba ee sheegtayaasha aqoonta u leh cilmiga duulista. Illaa iyo xilligan sayniska casriga ahi waxay la dagaallantay oo qabatay goobtii looga soo horjeeday dhammaan codsadeyaasha. Waxay ahayd dagaal dheer oo adag. Ninkii sharaf lahaa waxaa lagu xukumay isla dhalleecayn ama jees jeesi sida charlatan iyo fanaaniin ah. Duuliyaha oo hadda si habsami leh ugu duulaya hawada ama kor u kacaya ama dhaca, duufaanta ama kubbadaha ama muuqaallada quruxda badan ka hor intaanan daawadayaasha xiiseyneynin, wuxuu awoodaa inuu sidaas sameeyo maxaa yeelay xariiqda dheer ee ragga, oo gaareysa qarniyadii hore illaa xilligan la joogo, kaasoo sameeyey guusha uu u suurtagashay isaga. Waxay u adkaysteen jees jees iyo dhalleecayn si xor ah loo siiyay; Wuxuu kasbadaa abaalmarin weyn oo wuxuu helaa amaanta dadka xiisaha leh.
Sayniska duulimaadka lama soo dhaweyn ama si fudud looma soo dhaweyn goobada saynis ee la aqoonsan yahay iyadoo ay ku dayasho mudan yihiin cinwaankeeda ixtiraamka sayniska. Ragga cilmiga leh ee la ogolaaday ayaa qirtay sayniska duulaanka tiradooda maxaa yeelay waxay ahayd inay. Duulista ayaa la caddeeyay oo loo muujiyey dareenka inay yihiin wax xaqiiq ah, oo aan mar dambe la dafiri karin. Markaa waa la aqbalay.
Fikrad kasta waa in loo soo gudbiyaa imtixaannada oo la caddeeyaa ka hor inta aan loo aqbalin sida run ah. Waxa runta ah oo sida ugu fiican u adkaysan doona oo ka adkaan doona mucaaradka oo dhan waqtiga. Laakiin mucaaradka oo loo muujiyey waxyaabo badan oo ka baxsan waxa xilligan xaddidan ee sayniska xaddidan, ayaa ka hor-istaagay maannada loo tababbaray inay fikradaha sayniska ka qaataan soo-jeedinta oo u keenaan dhammaystirka fikradaha qaarkood oo waxtar weyn u lahaa aadanaha.
Dhaqanka sayniska la oggol yahay - inuu ku wareego mawduucyada ka baxsan oo aan la aqbalin — waa hubinta kororka iyo awoodda been abuurka iyo fanaaniinta, kuwaas oo u koraan sida haramaha ee ilbaxnimada. Haddii aysan ahaan lahayn dhaqankan sayniska, khayaanada, fanaaniinta iyo cayayaanka wadaadnimada, sida haramaha aan welwel lahayn, koraan oo dabooli kara, dad badan ama ka xayiran maskaxda dadka, waxay u beddelaan lahaayeen beerta ilbaxnimada jahwareega shakiga iyo cabsida waxayna ku qasbi doontaa Maskaxda si loogu celiyo shaki la’aanta suxufiga taas oo bini-aadamka lagu hoggaamiyo saynis.
Iyada oo la tixgalinayo jaahilnimada heerar kaladuwan ah oo ka dhex jira dhammaan maanka, waxay noqon kartaa, laga yaabee, inay ugufiican tahay in awoodda sayniska ay si cilmiyaysan u garaacdo una diido maaddooyinka ama waxyaabo ka baxsan xaddidankeeda xaddidan. Dhanka kale, aragtidan aan cilmiyan ahayn waxay caqabad ku tahay koritaanka sayniska casriga ah, waxay dib u dhigtaa daahfurka qiimaha leh ee laga samayn karo qaybaha cusub, maskaxda ayaa culays ku ah nacaybka aan cilmigu ku salaysnayn ee maskaxdana ka horjoogsanaya inay ka soo baxdo fikirkeeda illaa xorriyadda.
Waqti aan fogayn Joornaallada ku dhawaaqaya fikradaha sayniska waxay jees jeesteen ama dhaleeceeyeen kuwa dhisi doona mashiinnada duulaya. Waxay ku eedeeyeen kuwa wax duulaya inay yihiin doqonno ama riyooyin aan waxtar lahayn. Waxay qabteen dadaalladii duulimaadyadu waligood waxba kama noqonin, iyo in tamar iyo waqti iyo lacag lagu lumiyo isku dayyadan aan faa'iido lahayn waa in loo beddelaa kanaal kale si loo helo natiijooyin wax ku ool ah. Waxay ku celceliyeen doodaha mas'uuliyiinta si ay u caddeeyaan suurtagalnimada duulista farsamo ee nin.
Duulista ama duulista hadda waa saynis. Waxaa shaqaaleysiiya dowlado. Waa raaxada ugu dambaysa ee ay jecel yihiin ciyaartooyda isboorti. Waa mowduuc ganacsi iyo dan guud ah. Natiijooyinka horumarkiisa si taxaddar leh ayaa loo ogaadey mustaqbalkeedana si xamaasad leh ayaa loo filayaa.
Maanta dhammaan joornaalada waxay leeyihiin wax ay ku faani karaan "shimbiraha-shimbiraha," shimbiraha-shimbiraha, "duuliyeyaasha", iyo mashiinadooda. Xaqiiqdii, wararka ku saabsan sanbabada, hawada, hawada, duulista, duulimaadka ayaa ah soo jiidashada ugu weyn uguna dambeysay ee joornaallada lagu soo bandhigo adduunka xiiseeya.
Dhagxaantaan fikradaha bulsheed ku qasbay xaqiiqooyinka iyo aragtida dadweynaha si loo beddelo aragtidooda. Waxay rabaan inay siiyaan dadweynaha waxa ay maskaxda shacabka ka doonayaan. Waa hagaag in la iloobo faahfaahinta iyo isbeddelada fikradaha waqtiga socodka. Si kastaba ha noqotee, waxa ninku isku dayo inuu noolaado iyo waxa uu xasuusto waa in nacaybka iyo jaahilnimada weligood ma baari karaan koritaanka iyo horumarka maskaxda mana joojin karaan awoodda muujinta. Dadku waxay dareemi karaan xoog xagga fikirka ah in awoodiisa iyo suurtagalnimadiisa sifiican loo sheegi karo haddii uu si firfircoon uga shaqeeyo fakarka iyo ficilkaba waxa uu uraysto suurtagalka iyo tan ugu wanaagsan. Mucaaradka oo ay bixiyaan nacaybka iyo aragtida dadweynaha ayaa xannibi kara horumarkiisa. Cunsuriyada iyo fikradaha kaliya ayaa laga gudbi doonaa oo laga takhalusi doonaa iyadoo suurtagalnimada la caddeeyay. Waqtigan xaadirka ah, mucaaradka oo dhami waxay bixiyaan fursad ay ku horumariyaan awood waxayna lagama maarmaan u tahay koritaanka.
Daqiiqadaha fekerka, ee fikirka qoto dheer, ee ecstasy, nin, maskaxda, ogyahay inuu duuli karo. Waqtiga suuliga, dhageysiga war wanaagsan, marka neefsigu ku qulqulo si tartiib ah oo garaaca wadnaha uu sarreeyo, wuxuu dareemayaa inuu kor u kici karo oo kor ugu sii socon doono meelaha buluugga ah ee aan la garanaynin. Kadibna wuxuu fiiriyaa jirkiisa culus wuxuuna ku fadhiyaa dhulka.
Gooryaarka ayaa dilaaca, doofaarku wuu socdaa, kalluunka dabaasha iyo shimbiruhu way duulaan. Mid kasta oo yar ka dib markuu dhasho. Laakiin muddo dheer ka dib dhalashada xayawaanku ma duuli karo, mana dabbaalan karo, mana socon karo ama ma gurguuran karo. Waxa ugu badan ee uu sameyn karo waa in la isku dayo oo la laado oo la ooyo. Bilo badan dhalashada kadib wuxuu bartay sida loo gurguurto; ka dib dadaal badan ayuu gacantiisa iyo jilbaha isku shareeraa. Mar dambe iyo ka dib kuuskuusyo badan iyo dhicid kadib wuxuu awoodaa inuu istaago. Ugu dambeyntiina, tusaalaha waalidka iyo hagida badan, wuu ku socdaa. Sannado ayaa laga gudbi karaa ka hor inta uusan baran dabaasha, qaarna weligood ma baran.
Hadda ninku wuxuu mucjisada mucjisada ah ee duulimaadka farsamada, waxay umuuqataa in markii uu maareyn duulista hawada uu farsamo ahaan farsamo, uu gaari doono xadka suurtagalnimada farshaxanka duulista. Tani maahan. Waa inuu iyo waxbadan qabtaa. Iyada oo aan la samaynayn wax farsamo ah oo farsamo, garasho iyo keli ah, ee jirkiisa xorta ah, ninku waa inuu ku duulaa hawada markii la doono. Wuxuu awood u yeelan doonaa inuu sare u kaco ilaa inta awoodiisa neefsashada ay saamaxeyso, iyo inuu hago oo habeeyo duulimaadkiisa sida ugu fudud ee shimbiraha oo kale. Sida ugu dhakhsaha badan ee tani loo sameeyo waxay kuxiran doontaa fikirka iyo dadaalka dadka. Waxaa laga yaabaa inay taasi ku dhacdo in badan oo ka mid ah kuwa hadda nool. Da'yaasha dambe ee ragga oo dhami waxay awood u yeelan doonaan inay helaan farshaxan duulis ah.
Si ka duwan xayawaanku, ninku wuxuu ku bartaa isticmaalka jidhkiisa iyo dareenkiisa asaga oo la baray. Binu-aadamku waa inay lahaadaan casharro shay ama tusaale ah, ka hor intaysan aqbalin oo isku dayin wixii iyaga u suurtagali kara. Dabaasha iyo duulaanka, raggu waxay kalluunka iyo shimbiraha u adeegsadeen casharro ujeedo ah. Halkii ay ka heli lahaayeen raadinta xoogga ama tamarta ay shimbirtu u adeegsadaan duulimaadkooda, iyo barashada farshaxanka loo adeegsado, raggu had iyo goor waxay isku dayeen inay abuuraan xoogaa farsamo oo ay u adeegsadaan duulimaadka. Raggu waxay heleen dariiqa farsamo ee duulista, maxaa yeelay waxay ka fikireen oo u shaqeeyeen.
Ninku markuu daawado shimbiraha duullimaadyadooda, wuxuu ka fikiray iyaga oo doonayay inuu duulo, laakiin kalsooni uma lihin. Hadda kalsooni ayuu qabaa sababtoo ah wuu duulayaa. In kasta oo uu u habeeyey habka shimbiraha, uma duulo sidii shimbiraha oo kale, mana u isticmaalo xoogga shimbirta duulimaadkeeda.
Caqli ku dheehan tahay culeyska jirkooda iyo inayan ogeyn nooca fikirka ama xiriirkiisa la xiriira dareenkooda, ragga waxay la yaaban doonaan fakarka duulimaadka hawadooda ee jirkooda kaliya. Ka dib way shakiyeen. Waxay u egtahay in ay ku dari doonaan jees jees shaki ah, oo ay ku muujiyaan dood iyo khibrad in duulimaadka aadane ee aadan imaan. Laakiin maalin maalmaha ka mid nin hal geesinimo leh kana aqoon badan kuwa kale ayaa u duuli doona, iyada oo aan jid kale lahayn oo jidhkiisa ahayn. Markaa dadka kale ayaa arki doona oo rumaynaya. iyo, markay arkaan oo rumeeyaan, dareenkooda ayaa lagu toosin doonaa fikirkooda iyaguna iyaguna way duulaan doonaan. Markaa nimanku mar dambe shaki ma geli karaan, duulimaadka jirka ee duulimaadka jirka ahaana wuxuu noqon doonaa xaqiiqo la aqbali karo, oo caan ku ah ifafaalaha xoogagga cajiibka ah ee loo yaqaan gravitation iyo light. Way fiicantahay in la shakiyo, laakiin ma aha in wax badan laga shakiyo.
Ujeeddada duulista shimbiraha oo dhami kuma xirna kala-baxa ama kala-baxa baalasheeda. Awoodda ujeedada duulista shimbiraha ayaa ah ciidan gaar ah oo iyaga kiciya, taas oo markaa u oggolaanaysa inay sameeyaan duullimaadyadooda joogtada ah, oo ay ku dhex dhaqaaqi karaan hawada iyada oo aan kala bixin ama baalashooda baalashooda. Shimbiraha ayaa u adeegsada baalashooda in ay isku dheelitiraan jirkooda, iyo dabadaba sidii guuto oo kale hagidda duulimaadka. Baalalka sidoo kale waxaa loo isticmaalaa si ay u bilaabaan duulimaadka ama ay u horseedaan xoogga ujeeddada.
Xoogga uu shimbirtu u adeegsado inuu duulo waxay la jirtaa nin sida ay shimbirtu u tahay. Si kastaba ha noqotee, ninku taas ma yaqaan, ama haddii uu ka warqabo xoogga, isagu ma yaqaan adeegsiga loo gelin karo.
Shimbiruhu wuxuu duulimaadkiisa ku bilaabmaa isagoo duufaya, oo kala bixinaya lugaha, iyo inuu baalasheegayo baalasheeda. Dhaqdhaqaaqa neefsashadeeda, lugaheeda iyo baalasheeda, shimbirtu waxay ku faraxdaa unugyadeeda dareemeyaasha, si ay ugu keento xaalad cayiman. Markay xaaladaas ku jirto waxay kadhigtaa ujeeddada duulista duulimaadka inay ku dhaqaaqdo hay'addeeda dareemayaasha, si la mid ah sida korantada korantada ah ay ku kaceyso nidaam fiilooyin iyadoo loo jeedinayo furaha badhanka nidaamka. Markii xoogga ujeeddada duulista, ay xanbaarsan tahay jirka shimbirta. Jihada duulimaadka waxaa hagaya booska baalasheeda iyo dabadaba. Xawaaraheeda waxaa xukuma xiisadda dareemeyaasha iyo mugga iyo dhaqdhaqaaqa neefsashada.
Shimbirahaas ha ku duulaan isticmaalka baalashooda kaliya waxaa lagu muujiyey kala duwanaanshaha dusha sare ee garabka marka loo eego miisaanka jirkooda. Xaqiiqdii mudan in la xuso waa, in ay jirto hoos u dhac saamiyeed oo ku yaal dusha sare ee garabka ama aagga baalasheeda marka loo eego kordhinta culeyskeeda. Shimbiraha baalasheeda waaweyn iyo jirka iftiinka uma duuli karaan si dhakhso ah ama ilaa iyo shimbiraha baalashoodu ay yar yihiin marka la barbar dhigo culeyskooda. Sida ay shimbirtu u sii xoog badnaato uguna culus tahay waxay kuxiran tahay dusha sare ee baalasheeda duullimaadkeeda.
Shimbiraha qaarkood ayaa miisaankoodu yaryahay marka loo eego faafida ballaaran ee baalashooda. Tan looma baahna sababta oo ah waxay u baahan yihiin dusha sare ee garabka duulimaadka. Sababtuna waxay tahay baalalka baalasheeda weyn waxay u oggolaaneysaa inay si lama filaan ah kor ugu kacaan oo ay jebiyaan xoogga dhicitaankooda lama filaan ah. Shimbiraha duufaanta dheer iyo xawaaraha degdega ah oo caadooyinkooda aan u baahnayn inay kacaan oo dhacaan si lama filaan ah uma baahna badiyaana lahayn baalal ballaaran.
Cadeyn kale oo muujinaya in ujeedada duulista shimbiraha aysan ugu wacanayn dusha sare iyo habka baalasheeda, ayaa ah in mar kasta oo munaasabadu u baahan tahay, shimbirtu ay si weyn u kordhiso xawaaraha iyada oo kaliya ay yar tahay kororka dhaqdhaqaaqa baalasheeda ama iyada oo aan wax kordhin ah. ee dhaqdhaqaaqa garabka wax alla wixii. Haddii ay kuxiran tahay dhaqdhaqaaqa baalasheeda ee duulista xawaare kordhinta xawaaraha waxay ku xirnaan doontaa kordhinta dhaqdhaqaaqa garabka. Xaqiiqada ah in xawaarehooda si weyn loogu kordhin karo iyada oo aan loo badin saami u yeelashada dhaqdhaqaaqa garabka ayaa caddeyn u ah in waxa dhaqaajiya ay u sabab tahay awood kale oo aan ahayn dhaqdhaqaaqa muruqyada baalasheeda. Sababta kale ee duulimaadkeeda ayaa ah ujeeddada duulista.
In la soo gabagabeeyo.